Ngeke Ngiphinde Ngivalwe Amehlo Yizinhloso Ezinhle | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
2018-03-08 03:13:59 10
Ezinsukwini ezedlule, ibandla lanikeza omunye wabafowethu abancane umsebenzi omusha. Wayevame ukuba nempilo engeyinhle, kodwa kusukela lapho, waguquka waba umuntu omusha, waba nengqondo ekhaliphile futhi wakhuluma ngokuzethemba okwengeziwe. Ngolunye usuku, wakhuluma nami ngephimbo, isimo sobuso nangendlela eyangishiya ngicasuke ngokujulile. Ngangazi ukuthi wedlulisela intando kaNkulunkulu futhi ukhuluma iqiniso ngami, kodwa ngamane ngangakwazi ukumlalela, ingasaphathwa eyokwamukela lokho ayekusho. Lapho nje sengizophahluka, ngazibona mina masinyane kuye futhi ngakhumbula izwi nesimo sobuso engasisebenzisa ezinyangeni ezimbalwa ezedlule lapho ngikhuluma nomfowethu. Akumangalisi ukuthi ngathathwa njengowehlisayo. Wayeqotho kulokho ayekuzwa, futhi manje ngizwe nginokunengwa okufanayo nalokho akuzwa kimi—njengomuzwa wokucanuzela kwenhliziyo wokudla impukane efile. UNkulunkulu wahlela isimo esinjalo ukuze angenze ngibone leli qiniso: Umuntu onezinhloso ezinhle kodwa onesimo esingaguqukile akanayo indawo kaNkulunkulu enhliziyweni yakhe, ngakho, akubonakalisayo kuyimvelo, futhi kuwukubonakaliswa kwesimo sakhe sobusathane. Ngaleso sikhathi, ngakhumbula okuthile okusenkulumweni kaKristu: “Ukuzazi kuyilokhu: Lapho uzwa ngokwengeziwe ukuthi wenze kahle endaweni ethile, ucabanga ngokwengeziwe ukuthi wenze into efanele endaweni ethile, ucabanga ngokwengeziwe ukuthi unganelisa izinhloso zikaNkulunkulu endaweni ethile, futhi lapho ucabanga ngokwengeziwe ukuthi ufanelwe ukuqhosha endaweni ethile—kukufanele ngokwengeziwe ukuba uzazi kulezi zindawo futhi kukufanele ngokwengeziwe ukumba ujule kuzo ukuze ubone ukuthi yikuphi ukungcola okukhona nokuthi yiziphi izinto ezingakwazi ukwanelisa izinhloso zikaNkulunkulu” (“Ukuzazi Kudinga Ukwazi Imicabango Nemibono Yakho Egxilile” kwethi Izinkulumo ZikaKristu Ezilotshiwe). Ngalokhu, uNkulunkulu ufundisa abantu ukuba baqonde ukungabi nokuhlanzeka emazwini nasezenzweni zabo. Ngenxa yokuthi abantu ngokwemvelo banokuvukela futhi bayizitha zikaNkulunkulu, izenzo zabo, uma zingalungisiwe ngeqiniso, ngokwemvelo zimelana noNkulunkulu. Labo abacabanga ukuthi ukuziphatha kwabo kuvumelana neqiniso futhi abanakusolwa, empeleni abaguquliwe esimweni, futhi abakapheleliswa nguNkulunkulu. Baselokhu bemelana noNkulunkulu ngengqikithi yabo yangaphakathi futhi baveza isimo sobusathane. Kunokungcola okuningi kubantu okudinga ukuba kucubungulwe, kubonwe futhi kubhekwane nakho. Manje njengoba ngibheka emuva engxoxweni engaba nayo nalowo mfowethu, ngangibeke izaba ngokulunga kwami ngezinhloso zami ezinhle, kodwa ngehluleka ukuqaphela ukuthi ngangibe nendlela eyiphutha engxoxweni yami. Ngazibeka njengenkosi yeqiniso, umuntu onganquma ukuthi abanye baziphatha ngendlela ejwayelekile yini, futhi ohlukanisa ngokuphelele; ngangicindezela ongilalelayo ukuba amukele futhi ngokophawu oluncane lokungavumelani ngimbheke “njengongafuni iqiniso.” Yini engiyembulile? Ukuzithwala, ukukhahla, ukucindezela, ukuqinisa—izimo zikaSathane ezenyanyekayo nezicasulayo. Ingabe ukhona umehluko phakathi kwalokho engakwembula kanye nokucindezelwa kwezombusazwe okusezinhlanganweni zezombusazwe eziningi eziqhutshwa udrako omkhulu obomvu? Udrako omkhulu obomvu akathembele ndawo ngaphandle kwasezinhlosweni zakhe lapho enza izinsolo futhi ecindezela ngonya isintu. Empeleni angizange ngithandaze kuNkulunkulu noma ngifune ukuqondisa Kwakhe ngaphambi kokuxoxa nomfowethu, noma ngiqinisekise ukuthi wayesephutheni ngempela yini ngaphambi kokuba nombono wami wangaphambili, ngacabanga ukuthi ukungakhiqizi emsebenzini wakhe kwakungenxa yethonya elibi, futhi ngacindezela ukuba amukele ukusola. Manje ngiyabona ukuthi imvelo yami iyafana naleyo kadrako omkhulu obomvu—konke engangikwenza, ukubukeka kwami nendlela engangikhuluma ngayo konke kwakunephunga lezimo zokuzithwala okuwukubonakaliswa okwejwayelekile kukadrako omkhulu obomvu. Kungenzeka kanjani ukuthi ngibe usizo kubantu ngesimo sami esonakele? Kungenzeka kanjani ukuthi uMoya oNgcwele ungasebenza ngami? Ngaphandle kokusebenza Kwakhe, ngingakulindela kanjani ukuveza izithelo ngokukhuluma kwami? Manje ngiyabona ukuthi ukukhuluma akubanga nazithelo, hhayi ngoba umfowethu enqaba iqiniso, kodwa ngenxa yokuthi angizange ngibeke uNkulunkulu enhlizinyweni yami futhi ngangingeyena umuntu ofanele phambi kukaNkulunkulu. Lokho engakwembula kwakungenyanywa kuphela nguNkulunkulu, kodwa futhi nangabantu.
Okwedlule: Lokhu Ukwenza Iqiniso
Okulandelayo: Ubambiswano Lweqiniso